DF Soomaaliya oo gabi ahaan joojisay qabashada codsiyada cusub ee Baasaboorka | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DF Soomaaliya oo gabi ahaan joojisay qabashada codsiyada cusub ee Baasaboorka
Muqdisho (Halqaran.com) – Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha ee dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in gebi ahaan si kumeel gaar ah loo hakiyay qabashada codsiyada baasaboorka.
War qoraal ah oo kasoo baxay Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha oo la ogeysiiyay Shacabka Soomaaliyeed ayaa sababta go’aankaas lagu sheegay arrimo la xiriiro khatarta Cudurka Coronavirus.
“ Khatarta Caabuqa COVID19 oo sii kordheysa awgeed, Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyaddu, waxay muwaadiniinta Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan ku wargelinaysaa, in laga bilaabo maalinimada Sabtida ah, taariikhduna tahey Febaraayo 27, 2021 la hakiyey qabashada codsiyada baasaboorka ilaa wargelin danbe‘‘ ayaa lagu yiri qoraalka Hay’adda.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ay si tartiib tartiib ah u qaadeysay tallaabooyin looga hortagayo faafitanka cudurka COVID-19 oo kiisas badan laga helay Soomaaliya dad badan oo Caan ahaana ugu geeriyoodeen Magaalada Muqdisho.
Hay'adda Socaalka Jinsiyadda